Material Shell: Yemazuva ano desktop interface pamusoro peGNOME Shell | Kubva kuLinux
Kwete chete Nzvimbo dzeDesktop (DE) y Mahwindo ma maneja (WM) Isu "tinorarama" (tinakidzwa) avo vane shungu yekuita munhu uye kugadzirisa Graphical Mushandisi Nzvimbo (GUI) yemahara uye yakavhurika Maitiro Ekushandisa, senge GNU / Linux. Sezvo, nguva zhinji isu tine sarudzo senge madingindira (madingindira) kana makanda (makanda) own kana vamwe, kana kuwedzera-ons (plugins) kana kuwedzererwa izvo zvinotibvumidza isu kushoma kana zvakanyanya kuchinja zvinoonekwa zveLinux yedu.
Sezvo iri nyaya yekuwedzera inonzi Machira Shell, inowanikwa pa GNOME Shell, iyo inokwanisa kupa iyo yemazuva ano desktop interface yeLinux.
Machira Shell chiitiko chidiki chazvino, nekuti, sekureva kwayo saiti yepamutemo paGitHub iye amene anoshuma kusunungurwa kwake kwekutanga kunowanikwa, pasi pezita rekuti 1 version, yomusi 10 March we2020, uye kuburitswa kwayo kwazvino, pasi pezita 7 version, yomusi Nyamavhuvhu 15, 2020.
Uye zvakare, kukura kwayo kunobva pane imwe budiriro inonzi Zvinhu zvinotyisa. Ose ari maviri akagadzirwa uye akachengetedzwa neakadaidzwa mushandisi PapyElGringo.
1 Material Shell: Kuwedzera kukuru kweGNOME Shell
1.1 Chii chinonzi Material Shell?
1.2 Chii Chinopa Shell chinopa?
1.2.1 Iyo itsva spatial modhi
1.2.2 Iyo yakavandudzwa graphical interface
1.2.3 Iyo tiling-senge windows manejimendi injini
1.2.4 Zvimwe zvakakosha
Material Shell: Kuwedzera kukuru kweGNOME Shell
Chii chinonzi Material Shell?
Achidudza yake zviri pamutemo webhusaiti paInternet, inorondedzerwa se:
"Yemazuva ano desktop interface yeLinux, yakarongedzwa sekuwedzera kweGNOME Shell. Natsiridza ruzivo rwako rwevashandisi uye bvisa iyo yekushomeka kwekushomeka kwebasa kwema desktops echinyakare. Yakagadzirirwa kurerutsa kufamba uye kudzikisa kudiwa kwekushandisa windows kuvandudza kugadzirwa. Inoitirwa kuve 100% inofungidzirwa uye kuunza mabhenefiti ezvekushandisa zvinoshuiwa nenyanzvi kupasirese.".
Chii Chinopa Shell chinopa?
Paunenge uchigara mukati Shell zvinhu paGNOME Shell vashandisi vanogona kunakidzwa nezvinotevera maficha uye mashandiro akawedzera:
Iyo itsva spatial modhi
Iyo inokutendera iwe kufamba nenzira graphical nharaunda nekuita zvimwe hushamwari uye hunofungidzirwa. Sezvo, inosanganisira yakawedzera nzvimbo yekushandira kuti ive nemaapplication akawanda kamwechete uye chinja pakati pawo zviri nyore.
Izvi nekuda kwekuti imwe neimwe workspace inoratidzwa semutsara nemaapplication akati wandei. Uye kana chishandiso chitsva chikavhurwa, chinobva chaiswa pamagumo enzvimbo yekushanda iripo, nepo panowanikwa nzvimbo nyowani yebasa, inongowedzerwa pazasi, ichiratidza zvese zvakaitwa nenzira yakanaka kwazvo.
Ichi chimiro chinoita kuti zvive nyore, kufungidzira, uye kushanda nekumisikidza otomatiki windows isu. zvake nzvimbo yemamiriro egidhi inopa nzwisisa kufamba uye izvo zvinofambidzana kudyidzana nemaapplication. Uye zvakare, iko kushandiswa kwe mapfupi ekhibhodi inokutendera iwe kukwira nekudzika pakati penzvimbo dzekushandira, uye enda kubva kuruboshwe kurudyi pakati windows zvakanyanya nyore uye nekukurumidza.
Iyo yakavandudzwa graphical interface
Iyo yakagadzirirwa kupa muongororwo wekuti zvese zviripi, pamwe nekutendera kuongorora kweiyo Desktop Nzvimbo (DE), zvese negonzo uye pane inobata skrini. Nezve dhizaini yayo, iyo yakakamurwa kuita zvikamu zviviri kana mapaneru.
El kuruboshwe kuruboshwe inochengetedza zvese zvine chekuita nesystem (yakavhurika nzvimbo dzekushandira, yazvino system mamiriro, ziviso), nepo panelere rudyi inochengetedza nzvimbo yekushandira iri kushandiswa (windows mumutsara webasa rekushandira, switch switch, uye iwo mahwindo pachawo). Mariri, zvinhu zviviri zvakakosha zvinomira, zvinova izvo system pani (kuruboshwe) uye iyo workspace pani (kumusoro).
Nezve iro dhizaini dhizaini, inotevera iwo marongero eiyo Chimiro Chinyorwa Chido, iyo inopa hwaro hwakasimba iyo inobvumidza kupa iyo aesthetic uye inowanikwa zvakanyanya interface. Uye zvakare, inosanganisira matatu anowanikwa madingindira ari: Rima, Chiedza uye Chekutanga. Iyo yekupedzisira inotibvumidza isu kushandisa ruvara rwesarudzo yedu. Inopawo mukana wekukanganisa chimiro, kune avo vashandisi vanoda kupenya girazi.
Iyo tiling-senge windows manejimendi injini
Iyo inokutendera iwe kuronga ako windows nenzira inofungidzirwa nzira iyo ivo vasingawirirane, iyo inobvisa iyo clutter yehwindo manejimendi. Saka, Machira Shell inobvumira nzira dzakasiyana dzekuona windows dze chimiro chakarukwa. Uye izvi zvinotevera:
Yakakwidziridzwa: Hwindo rimwe chete rinotora nzvimbo yese yebasa.
Govanisa: Mahwindo maviri, rimwe padivi peimwe, rinotora hafu yebasa rekushandira imwe neimwe.
Columnar: Ese windows anoratidzwa semakoramu (anobatsira kune Ultra-yakafara yekutarisa)
Pakati: Hwindo kuruboshwe uye mamwe mahwindo akarongedzwa kurudyi.
PaGridhi: Ese windows anoratidzwa segidhi.
Material Shell inopawo kushingirirandiko kuti, kugona kurangarira uye / kana kugadzirisa zvigaro zvekuvhura hwindo. Uye mutambo wakanakisa we mapfupi ekhibhodi kugadzirisa zviri nyore izvo zvinodiwa, kudzivirira kushandiswa kwegonzo.
Kuti udzidze zvakawanda nezve Machira Shell uye unzwisise zvizere kuti zvese zvakatsanangurwa pamusoro zvinoita sei, unogona kushanyira zvinotevera official link en GNOME Extensions, uye wozviona zvichiitika kuburikidza neyako yepamutemo YouTube mavhidhiyo, usati waedza kumhanya yako yekumisikidza maitiro.
Tinovimba izvi "inobatsira shoma posvo" nezve yakawedzera yekuwedzera yeGNOME Shell inonzi «Material Desing», iyo inopa yemazuva ano desktop interface yeLinux; ndeyekufarira kukuru uye kushandiswa, kweiyo yese «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» uye yemupiro mukuru mukupararira kweinoshamisa, hombe uye kukura ecosystem yezvishandiso zve «GNU/Linux».
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Chitarisiko / Kuita munhu » Material Shell: Yemazuva ano desktop interface pamusoro peGNOME Shell
Mhoroi, ndinoda uku kuwedzerwa uye ndinokorokotedza kumusiki wayo, asi chirevo changu chinoenda kune ino blog peji.desdelinux.net pese paunoshanyira peji rino rinondikumbira kuti ndibvume makuki uye kamwe paakatambira, kushambadza uko chokwadi kunotora dzinenge dzese chidzitiro chenharembozha yangu ichiita kuverenga chinyorwa chinogumbura, ndapota shamwari, ita zvishoma kuyerwa mukushambadzira, pane dzinoverengeka ndakarega kuverenga zvinyorwa zvaunoburitsa nekuda kwechikonzero ichi asi izvozvi ndave nenguva ndinotaura pane izvi , Ndinovimba unoziva kunzwisisa, kukwazisa
Firefox 82 inosvika pamwe nekuvandudzwa kwevhidhiyo, mhanyisa uye nezvimwe